Tuta absoluta - ဝီကီပီးဒီးယား
Phthorimaea absoluta Meyrick, 1917
Tuta absoluta သည် မျိုးရင်း Gelechiidaeတွင် ပါဝင်သော ပိုးဖလံမျိုးစိတ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး tomato leafminer, tomato pinworm နှင့် South American tomato moth ဟူ၍ သိကြသည်။ ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အနောက်အာရှ၊ တောင်နှင့် ဗဟိုအမေရိကတို့ရှိ ခရမ်းချဉ်စိုက်ခင်းများကို ပြင်းထန်စွာ ဖျက်ဆီးတတ်သော ပိုးမျိုးအဖြစ်လည်း သိကြသည်။ ယင်း၏ ဘဝစက်ဝိုင်းတွင် အဆင့်လေးဆင့်ရှိပြီး ဥ၊ သားလောင်း၊ ပိုးတုံးလုံးနှင့် သက်ကြီးကောင် တို့ ဖြစ်သည်။ ဥများကို သစ်ရွက်အောက် သို့မဟုတ် ပင်စည်တွင် ဥလေ့ရှိသည်။ အကောင်ပေါက်ပြီးနောက် သားလောင်းသည် သစ်ရွက်၊ အသီး (ခရမ်းချဉ်သီးကဲ့သို့)နှင့် ပင်စည်တို့ကို ထိုးဖောက်စားသုံးကာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာသည်။ ပိုးတုံးလုံးကောင် (၅-၆ မီလီမီတာ အရှည်) သည် ဆလင်ဒါပုံရှိပြီး အစိမ်းရောင်ရှိကာ သက်ကြီးကောင်အဆင့်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် အရောင်ရင့်ရင့် ဖြစ်သွားသည်။ သက်ကြီးကောင်သည် ၆ မှ ၇ မီလီမီတာခန့် ရှည်လျားပြီး အာရုံခံအင်တာနာပါဝင်ကာ ငွေရောင်မှ မီးခိုးရောင် အကြေးခွံများ ရှိသည်။ အတောင်ပံပေါ်တွင် အမည်းရောင် အစက်များပါရှိပြီး အမသည် အထီးထက် ပိုမိုထုထည်ကြီးသည်။
၁ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပျံ့နှံ့မှု
၆.၁ လောက်ကောင်များ၏ ဖျက်ဆီးမူ အခြေအနေ
၆.၂ အသီးပေါ်တွင် ဖျက်ဆီးခြင်း
ဤပိုးဖလံကို အစောပိုင်းက တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် ခရမ်းချဉ်ဖျက်ပိုးအဖြစ် သိထားကြသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စပိန်နိုင်ငံ၌ စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဂရိ၊ မော်လတာ၊ မိုရိုကို၊ အယ်ဂျီးရီးယားနှင့် လစ်ဗျားနိုင်ငံတို့တွင် ဆက်လက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တူရကီနိုင်ငံ၌ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြန်သည်။ T. absoluta သည် အရှေ့ဖက်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့ခဲ့ကာ ဆီးရီးယား၊ လက်ဘနွန်၊ ဂျော်ဒန်၊ အစ္စရေး၊ အီရတ်နှင့် အီရန်နိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တောင်ဘက်ပိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်သော ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ယီမင်၊ အိုမန်နှင့် ပါရှားပင်လယ်ကွေ့အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အာဖရိကတိုက်တွင် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ အရှေ့ဖက်သို့ ဆူဒန်၊ တောင်ဆူဒန်နှင့် အီသီရိုးပီးယားနိုင်ငံများဆီသို့လည်းကောင်း၊ အနောက်ဘက်ရှိ ဆီနီဂေါနိုင်ငံသို့လည်းကောင်း ရောက်ရှိ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံတို့တွင်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဟာရဋ္ဌပြည်နယ်ရှိ ခရမ်းချဉ်စိုက်ခင်းတို့တွင် ကျရောက်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက နီပေါနိုင်ငံရှိ ခရိုင်များစွာတွင်လည်း ဤပိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အပူပိုင်းခရမ်းချဉ်စိုက်ပျိုးရာ ဒေသများဖြစ်သော မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မုံရွာတို့တွင် ရောက်ရှိပျံ့နှံ့နေပြီ ဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်လျှင် ၁၀-၁၂ ထက်ထိ မျိုးပွားနိုင် မိတ်လိုက်ပြီ ၁- ၂ ရက်ဝန်းကျင် တွင် ဥ စဖြစ်ပြီး အမတစ်ကောင်လျှင် ဥ ၂၆၀ ထက်ဥနိုင် ဘဝစက်ဝန်း ကြာ ချိန်မှာ ရာသီဥတု ပေါ်မူတည် ပြီး ၂၄ ရက် မှ ၃၈ ရက်ထိရှိ ၂၆`C ၃၀' Cတွင်ပေါက်ဖွားနူန်းပိုမြန်သည်။
တူတာ ရွက်ထွင်းပိုး ၏ ဥ သည် အများအားဖြင် ဘဲဥ ပုံ သဏ္ဌာန် ရှိပြီး နို့နှစ်ရောင်မှ အဝါ ရောင်ဖျောဖျော့ထိ ရှိနိုင် သန္ဓေ စဖြစ်မည်ဆိုပါက ဥ သည် မဲနက်လာသည်။
လောက်ကောင်သည် စားသောက်သည့် အစားအသောက်ပေါ်မူတည်ပြီး စိမ်းဖန့်ဖန့် ရောင်မှ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ ရှိသည် ပိုးတုံးလုံး ကောင်းသည်မှာကားလောက်ကောင်ထက် အရောင်ပိုဖျော့သည် လောက်ကောင်သည် အရွက် အညွန့်နှင့် အသီးတို့ကို ဖျက်ဆီး စားသောက်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးကောင်သည် ၁၀ မီလီမီတာခန့်ရှည့်လျားပြီး မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့အကြေးခွံ ရှိသည် ရာသီဥတု အခြေအနေများပေါ်မူတည်ကာ မီးခိုးရောင်ဖျေ့ဖျော့ကနေ မီးခိုးရောင်ရင့်ရင် ကို လှည့်ပတ်ပြောင်းလဲနေတတ်သည်။
အပင်၏ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးတွင် ဆိုးဝါး ဆိုးဝါးပြင်းထန်စွာ ကျရောက်ဖျက်ဆီးပြီး မျိုးပွားမူနူန်း အလွန်မြန်သဖြင့်နှိမ်နင်းရန်ခက်ခဲသော ပိုးဖြစ် ပျိုးပင် ဘဝမှ စတင်ကာ အပင်သက်တမ်းဆုံးသည်ထိ ကျရောက်နိုင်သည်။
လောက်ကောင်များ၏ ဖျက်ဆီးမူ အခြေအနေ[ပြင်ဆင်ရန်]
လောက်ကောင်သည် အရွက်၏ နှစ်လွှာကြားရှိ အစိမ်းရောင်အလွှာကို ခြစ်ယူစားသောက်ပစ်သည် အရွက်ပေါ်တွင် ကြီးမားသိသာထင်ရှားသော အကွက်များ မှ တစ်ရွက်လုံးထိ ဖျက်ဆီးစားသောက်ပစ်ပြီး အဆိုပါ ပုံ သဏ္ဌာန် မမှန်သော လမ်းကြောင်းများ သည် အစားချက်လုပ်မူကို ဆိုးဝါးစွာ လျှော့ နည်းစေသလို ရောဂါ ဝင်ရောက်မူကိုလဲ လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အသီး ခပ်နုနု အနေအထားတွင် စားသောက်ဖျက်ဆီးပစ်တတ်ကြသည်။ အပေါက်ငယ်လေးများ အသီးများ ပုံ သဏ္ဌာန် မမှန်ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ခရမ်းချဉ် အထွက်နူန်းကိုဆိုးဝါး စွာ ထိခိုက်စေသည်။
↑ Coelho MCF, Franc¸a FH (1987) Biologiaequemotaxia da larvaedescrição da pupaeadulto da traça-do-tomateiro. Pesqui Agropecu Bras 22:129–135
↑ Urbaneja A, Vercher R, Navarro V, García Marí F, Porcuna JL (2007) La polilla del tomate, Tuta absoluta. Phytoma España 194:16–23.
↑ Bloomberg - Are youarobot?။
↑ Ajaya Shree Ranta Bajracharya, Ram Prasad Mainali, Binu Bhat,Sanjaya Bista, Pathour R Shashank and Naresh Manohar Meshramhttp://www.entomoljournal.com/archives/2016/vol4issue4/PartO/4-4-95-749.pdf The first record of South American tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick 1917)(Lepidoptera: Gelechiidae) in Nepal
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuta_absoluta&oldid=543748" မှ ရယူရန်